Foden Oo Sabab Layaab Leh Looga Saaray Tababarkii Xulka Ingiriiska Kahor Fiinaalka Euro 2020 – Garsoore Sports
Foden Oo Sabab…
Phil Foden tababar lama qaadanin inta kale ee xulkiisa Ingiriiska maanta oo sabti ah iyadoo xiddigan tababarka looga reebay sabab layaab leh.
Waxay ahayd tababar muhiim u ah xulka kahor fiinaalka Euro 2020, laakiin cayaaryahanka khadka dhexe, dhaawac looga baqayo dartiis, kamuu qeyb qaadan tababarka.
Ma’ahan war wanaagsan oo usoo yeeray tababare Gareth Southgate. Kubbad-sameeyaha Manchester City ayaa noqday mid kamid ah ciyaartoydiisa ugu muhiimsan ee xulka saddexda libaax. Waxaana tababarka looga saaray taxaddar ku aadan inaanu dhaawac soo gaarin kahor kulanka Talyaaaniha, xitaa haddii uu keydka kasoo cayaarayo maadaama uu dhaawac dhowaan kasoo kabsaday.
Cayaarihii ugu dambeeyay ee Ingiriiska, tababaraha ma uusan kusoo bilaabin isaga. Wuxuu kursiga keydka kasoo kacay kulankii Denmark ee waqtiga dheeriga ah mana uusan ciyaarin kulamadii Ukraine iyo Jarmalka. Wuxuuna ka qeyb qaatay kulamadii Scotland iyo Croatia isagoo u muuqday mid wanaagsan kulamadaas.
Ingiriiska ayaa si toos ah baraha bulshada ku wadaagtay muuqaal tababarkooda ah, sidaa darteed way fududahay in la sheego in Foden uusan joogin. 25-ka kale ee ciyaartooydu waa taam waxaana loo tababaray si caadi ah.
Rasmi: Arsenal Oo Dhameeystirtay Saxiixa Daaficii Aadka Loola Xiriirinayay